Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: lasa ny mamba misosoka ny voay | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: lasa ny mamba misosoka ny voay
Fihetsiketsehana sy fanovana tabataba no betsaka mitaha amin’ny famoaboasana hevitra entina handresen-dahatra. Izany no re manerana ny tanàna ao anatin’izao fotoana fampielezan-kevitra mialoha ny fifidianana depiote izao, tamin’ity indray mitoraka ity. Noho ny fandaharam-potoana samy manana ny azy, mifanindry amin’ny fotoam-pifidianana ny fanovana ny tompon’andraikitra tampony hitantana ny Bianco. Miposaka araka izay ireo hetahetan’ilay Directeur Général mandao ny toerana mikasika ny fanitsina rafitra izay heveriny mbola ilaina hampahefa bebe kokoa ny ezaka ataon’ny Bianco amin’ny ady atao amin’ny kolikoly.
Asa aloha raha sendra fotoana nifanandrify fotsiny, fa toy ny fanamafisana ny hetaheta natsidik’ilay DG momba ny filana fanitsiana mikasika ny «immunité parlemantaire» ny fitonton’ny fanambarana momba ilay raharaha mamatopatotra depiote 79 izay apangaina ho nandray anjara tamin’ny fitsikombakombana miharo kolikoly. Nahavita ny anjarany ny Bianco. Tsy milaza akory izany fa meloka ireo depiote ireo na mety hiakatra fitsarana aza noho ny fampitana an’ilay raharaha avy any amin’ny Bianco any amin’ny ambaratonga manaraka. Zara raha vao nivoaka izay fanambarana izay, dia efa nipoitra ny fanentanana manainga ny vahoaka tsy hifidy intsony mpilatsaka efa nanefa fe-potoana tamin’ny toerana depiote.
Tsy azo atao safobe mantsina araka izay anefa ny mpikambana rehetra tao amin’ny Antenimierampirenena, satria na ireo voarohirohy aza dia tsy azo lazaina ho meloka raha mbola tsy misy ny fitsarana manambara ny maha meloka azy. Na izany aza, ireo fisehon-draharaha ireo dia anatra maniraka amin’ny fanaovana ho adidy ny fandinihana lalina ny mombamomba ireo mpilatsaka rehetra, alohan’ny fisafidianana izay hametrahana ny fitokisana.
Tsapa ankehitriny fa tsy nanome fahafaham-po araka izay tokony ho izy ny Antenimierampirenena. Ireo depiote tratra farany teo moa no mizaka ny laza ratsy. Na izany aza anefa, tsy mety ny fanaovana tsiaro toy ny momba ny toetr’andro ka hohadinona ny fangirifirin’ny hatsiaka tamin’ny taon-dasa. Raha nisy tsy mendrika ireo solombavambahoaka teo aloha, izy no ratsy fa ny mpifidy azy koa tsy afaka hialangalana fotsiny ka ho afaka adidy noho izay. Rehefa manana zo hifidy, na manefa na tsia an’izay adidy izay, dia tompon’andraikitra avokoa ary samy hizaka miaraka ny vokatry ny safidim-bahoaka. Soa araka izany ireo fisehoan-draharaha mifanosona miara-mitotona ireo.